Homenepaliनेपाली ब्लगर तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता हरुमा अनुरोध
mskhanal 10:38 PM
Basanta April 30, 2010 at 7:54 AM
एकदम सान्दर्भिक आवश्यक कुरो! त्यो संभावनाको नजिक पुगिरहेका छौं हामी। यसका लागि ब्यापक सरसल्लाह हुनु आबश्यक छ।
Jotare Dhaiba May 1, 2010 at 11:41 PM
मनासिब अभिमत !
ब्लग पनि सञ्चारकै एक हाँगा हो र यो जिम्मेवारमुक्त बस्न सक्दैन । यसअगि पनि आफ्नो गति र सोचले राजनीतिक र सामाजिक मुद्दामा दबाबमूलक र खबरदारी लेखन थपेकै हो । स्थितिअनुरुप अब पनि त्यो अभियान आफ्नो तवरबाट सबै ब्लगरले गर्ने नै छन् । संयुक्त र विशेष अभियानको लागि भने अलि पापड बेल्नुपर्ला ।
mskhanal May 1, 2010 at 11:49 PM
आशा राखौँ त्यो परिस्थिति नआओस तर त्यो परिस्थितिको लागि तयार भएर बस्नु आबस्यक छ। त्यसको लागि छलफल र बहस गर्न हाम्रा ब्लगर चौतारी प्रयोग गर्न सकिन्छ